SEO को लागी तपाइँको शीर्षक ट्याग कसरी अनुकूलन गर्ने (उदाहरणका साथ)
के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाइँको पृष्ठमा बहु शीर्षकहरू हुन सक्छन् जहाँ तपाइँ तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ? यो सत्य हो ... यहाँ चार फरक शीर्षकहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा एकल पृष्ठको लागि राख्न सक्नुहुन्छ।
शीर्षक ट्याग - HTML जुन तपाइँको ब्राउजर ट्याबमा प्रदर्शित हुन्छ र खोजी परिणामहरूमा अनुक्रमित र प्रदर्शित हुन्छ।
पृष्ठ शीर्षक - शीर्षक जुन तपाइँ तपाइँको सामग्री प्रबंधन प्रणाली मा तपाइँको पृष्ठ यो सजीलो पाउन को लागी दिनु भएको छ।
पृष्ठ शीर्षक - सामान्यतया तपाइँको पृष्ठको शीर्षमा H1 वा H2 ट्याग जसले तपाइँको आगन्तुकहरूलाई थाहा दिन्छ कि उनीहरू कुन पृष्ठमा छन्।
रिच स्निपेट शीर्षक - शीर्षक जुन तपाईं प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ जब व्यक्तिहरूले तपाईंको पृष्ठ सामाजिक मिडिया साइटहरूमा साझा गर्दछ र त्यो पूर्वावलोकनमा प्रदर्शित हुन्छ। यदि एक धनी स्निपेट छैन भने, सामाजिक प्लेटफर्म सामान्यतया शीर्षक ट्यागमा पूर्वनिर्धारित हुनेछ।
म प्राय: सबैलाई अनुकूलन गर्छु जब म पृष्ठ प्रकाशित गर्दछु। सामाजिक मा, म आकर्षक हुन सक्छ। खोजमा, म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि म कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्दै छु। हेडि Onहरूमा, म निम्न सामग्रीहरूको स्पष्टता प्रदान गर्न चाहन्छु। र आन्तरिक, म सजिलैसँग मेरो पृष्ठ पाउन सक्षम हुन चाहन्छु जब म आफ्नो सामग्री प्रबन्धन प्रणाली खोज्दैछु। यस लेखको लागि, हामी तपाईंको अनुकूलनमा फोकस गर्नेछौं खोजी ईन्जिनहरूका लागि शीर्षक ट्याग.
शीर्षक ट्यागहरू, कुनै श doubt्का बिना, यो पृष्ठको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो जब यो तपाइँको खोज सर्तहरूको लागि तपाइँको सामग्रीलाई सही ढ index्गले अनुक्रमणिका गर्ने कुरामा आउँदछ। र जुन सबैको प्रेमको लागि एसईओ... कृपया तपाईंको गृह पृष्ठको शीर्षक अपडेट गर्नुहोस् घर। म प्रत्येक चोटि क्रिन्ज गर्दछु जब म साइट हेर्छु जहाँ उनीहरू गृह पृष्ठ शीर्षक अप्टिमेट गर्दैनन्! तपाई दस लाख अन्य पृष्ठहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ होम!
गुगलले शीर्षक ट्यागको लागि कति अक्षरहरू प्रदर्शन गर्दछ?
के तपाईंलाई थाहा छ यदि यदि तपाईंको शीर्षक ट्यागले गुगलले प्रयोग गर्न सक्ने characters० क्यारेक्टरहरू भन्दा बढि छ तपाईंको पृष्ठबाट फरक सामग्री सट्टा? र यदि तपाईं characters 75 क्यारेक्टरहरू भन्दा बढि हुनुहुन्छ भने गुगल भर्खर जाँदैछ 75 वर्ण पछि सामग्री बेवास्ता गर्नुहोस्? राम्रोसँग फर्म्याट गरिएको शीर्षक ट्याग हुनुपर्दछ and० र characters० वर्णहरू बीच। म 50० र characters० अक्षरहरूको बिच अनुकूलन गर्न चाहन्छु किनकि मोबाइल खोजीले केहि अधिक अक्षरहरू काट्न सक्छ।
मापनको अन्त्यमा, म धेरै कम्पनिहरू प्याक गर्न को लागी देख्छु र उनीहरूको मा अनावश्यक वा व्यापक जानकारी को एक धेरै सामान भरिपूर्ण गर्न को लागी शीर्षक ट्यागहरू। धेरैले कम्पनीको नाम, उद्योग र पृष्ठ शीर्षक राख्छन्। यदि तपाईं आफ्नो लागि राम्रो क्रममा हुनुहुन्छ ब्रान्ड कुञ्जी शब्दहरू, शीर्षकहरूले तपाइँको कम्पनीको नाम समावेश गर्न आवश्यक पर्दैन।
त्यहाँ केहि अपवादहरू छन्, अवश्य:
तिमीसंग विशाल ब्रान्ड। यदि म हुँ न्यूयोर्क टाइम्सउदाहरण को लागी, म सायद यो समावेश गर्न चाहान्छु।
तपाईं ब्रान्ड सचेतना चाहिन्छ र राम्रो सामग्री छ। म यो अक्सर युवा ग्राहकहरूको प्रतिष्ठा निर्माणको साथ गर्दछु र उनीहरूले केही उत्कृष्ट सामग्रीमा भारी लगानी गरेका छन्।
तपाईंसँग एउटा कम्पनी नाम छ जुन वास्तवमा हो प्रासंगिक कुञ्जी शब्द समावेश गर्दछ. Martech Zone, उदाहरण को लागी, पछि काम आउन सक्छ मार्टेक सामान्यतया खोजी गरिएको शब्द हो।
गृह पृष्ठ शीर्षक ट्याग उदाहरणहरू
गृह पृष्ठलाई अनुकूलन गर्दा, म सामान्यतया निम्न ढाँचा प्रयोग गर्दछु
कुञ्जी शब्दहरू जुन तपाईंको उत्पाद, सेवा, वा उद्योग वर्णन गर्दछ कम्पनीको नाम
भिन्निय सीएमओ, परामर्शदाता, वक्ता, लेखक, पोडकास्टर | Douglas Karr
तपाईंको सेल्सफोर्स र मार्केटि Cloud क्लाउड लगानी बढाउनुहोस् Highbridge
भौगोलिक पृष्ठ शीर्षक ट्याग उदाहरणहरू
लगभग सबै मोबाइल गुगल खोजीको एक तिहाइ अनुसार अनुसार सम्बन्धित छ निलो कोरोना। जब म भौगोलिक पृष्ठको लागि शीर्षक ट्यागहरूलाई अनुकूलित गर्दै छु, म सामान्यतया निम्न ढाँचा प्रयोग गर्दछु।
कुञ्जी शब्दहरू जुन पृष्ठ वर्णन गर्दछ भौगोलिक स्थान
इन्फोग्राफिक डिजाइन सेवाहरू | इन्डियानापोलिस, इंडियाना
सामयिक पृष्ठ शीर्षक ट्याग उदाहरणहरू
जब म सामयिक पृष्ठको लागि शीर्षक ट्यागहरू अनुकूलन गर्दैछु, म सामान्यत: निम्न ढाँचा प्रयोग गर्दछु।
कुञ्जी शब्दहरू जुन पृष्ठ वर्णन गर्दछ वर्ग वा उद्योग
ल्यान्डि Page पृष्ठ अनुकूलन | प्रति क्लिक सेवाहरू भुक्तान गर्नुहोस्
प्रश्न शीर्षक ट्यागमा ठूलो काम
नबिर्सनुहोस् कि खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूले अब खोज इञ्जिनहरूमा थप विस्तृत प्रश्नहरू लेख्न टेन्डिंग गरिरहेका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबै अनलाइन खोज प्रश्नहरूको लगभग %०% मा दुई कुञ्जी शव्दहरू थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा online०% भन्दा बढि अनलाइन खोजहरु तीन शब्द वा अधिक थिए।
गुगल खोज प्रश्नहरूको of of% भन्दा बढि + शब्द लामो छ
यस पोष्टमा, तपाइँ शीर्षक फेला पार्नुहुनेछ:
SEO को लागी तपाइँको शीर्षक ट्याग कसरी अनुकूलित गर्ने (उदाहरणका साथ)
प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गर्दैछन् को, के, किन, किन, कहिले र कसरी विगतमा भन्दा उनीहरूका खोज क्वेरीहरूमा। एउटा प्रश्न शीर्षक छ जुन खोज क्वेरीसँग मेल खान्छ उत्तम तरिकामा अनुक्रमित हुने र तपाइँको साइटमा केहि खोजी ट्राफिक ड्राइभ गर्न उत्तम तरिका हो।
धेरै अन्य साइटहरूले शीर्षक ट्यागहरू र बारेमा लेखेका छन् शीर्षक ट्याग SEO र म निश्चित छु कि म तिनीहरूसँग कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने छु किनकि उनीहरूको साइटले एसईओ-सम्बन्धित सर्तहरू हावी गर्दछ। त्यसो भए मैले जोडें उदाहरणका साथ मेरो पोष्ट फरक पार्ने प्रयास गर्नुहोस् र अधिक क्लिकहरू ड्राइभ गर्नुहोस्!
सम्भव भएसम्म धेरै अक्षरहरूको प्रयोग गर्दा तपाई लजाउनु पर्दैन। पहिले अत्यधिक केन्द्रित कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग, पछि विस्तृत सर्तहरू पछिको, एक उत्तम अभ्यास हो।
वर्डप्रेसमा शीर्षक ट्याग अनुकूलन
यदि तपाईं WordPress मा हुनुहुन्छ भने, उपकरणहरू जस्तै रैंक मठ एसईओ प्लगइन तपाइँलाई तपाइँको पोष्ट शीर्षक र तपाइँको पृष्ठ शीर्षक दुबै अनुकूलित गर्न अनुमति दिनुहोस्। दुई फरक छन्। एक WordPress साइटको साथ, पोष्ट शीर्षक सामान्यतया पाठको मुख्य भाग भित्र हेडि tag ट्याग भित्र हुन्छ, जबकि तपाईंको पृष्ठ शीर्षक हो शीर्षक ट्याग त्यो खोज ईन्जिनले क्याप्चर गरेको छ। बिना WordPress एसईओ प्लगइन, दुई समान हुन सक्छ। रैंक म्याथ एसईओ प्लगइनले तपाईंलाई दुबै परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ ... ताकि तपाईं पेज भित्र एक सम्मोहक शीर्षक र लामो शीर्षक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - तर अझै पृष्ठ शीर्षक ट्याग उचित लम्बाइमा सीमित गर्नुहोस्। र तपाइँ एक वर्ण गणना संग यसको पूर्वावलोकन देख्न सक्नुहुन्छ:
Google०% गुगल खोजीहरू अब मोबाइल मार्फत गरिएका छन् त्यसैले रेank्क म्याथले मोबाइल पूर्वावलोकन पनि प्रदान गर्दछ (शीर्ष दायाँ मोबाइल बटन):
यदि तपाईंसँग प्लगइन छैन भने तपाईं सामाजिक मिडियाको लागि तपाईंको रिच स्निपेट्स अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ, शीर्षक ट्यागहरू प्राय: सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू द्वारा प्रदर्शित हुन्छ जब तपाईं लिंक साझा गर्नुहुन्छ।
क्लिकहरूलाई ड्राइभ गर्ने संक्षिप्त, सम्मोहक शीर्षक विकास गर्नुहोस्! तपाइँ के विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसमा कुञ्जी शब्दहरू फोकस गर्नुहोस् आगन्तुक केन्द्रित हुनेछ र अधिक केहि पनि छैन। र नबिर्सनुहोस् तपाईंको मेटा विवरण अनुकूलन गर्नुहोस् तपाइँको खोज प्रयोगकर्ता ड्राइभ गर्न को लागी क्लिक गर्न को लागी।
प्रो सुझाव: तपाईंले आफ्नो पृष्ठ प्रकाशित गरेपछि, तपाईं कसरी एक हप्ताको साथ केही हप्तामा क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ भनेर जाँच गर्नुहोस् SEMrush। यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि तपाइँको पृष्ठ कुञ्जी शव्दहरूको फरक संयोजनको लागि राम्ररी रे ranking्कि is भइरहेको छ भने ... तपाइँको शीर्षक ट्यागलाई पुन: लेख्नुहोस् यसलाई नजिक मिलाउन (यदि यो प्रासंगिक हो, अवश्य)। म यो सबै मेरो लेखहरूमा गर्दछु र म खोज कन्सोलमा क्लिक-थोरै दरहरू अझ बढि हेरीरहेछु!
अस्वीकरण: म यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु SEMrush माथि।
टैग: HTMLअनुकूलनपृष्ठ शीर्षकश्रेणी गणित एसईओखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओशीर्षकशीर्षक ट्याग अक्षरहरूशीर्षक ट्याग कीवर्डहरूशीर्षक ट्याग लम्बाईशीर्षक ट्याग अनुकूलनशीर्षक ट्याग रिच स्निपेट्सशीर्षक ट्याग एसईओशीर्षक ट्यागहरूखोज क्वेरीहरूमा शब्दहरू
शिर्षक ट्याग सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मेटा तत्व हो र र्यान् .्ग कारक हो। धेरै वेबसाइटहरूले केवल कम्पनीको नाम प्रयोग गरेर यस ठाउँलाई खेर फाल्ने गल्ती गर्दछन्। यो पृष्ठमा के छ वर्णन गर्न कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
नोभेम्बर,, २०१ at 1::2012 बिहान
अद्भुत पोष्ट र विस्तृत ... भविष्यमा, यसलाई शीर्षक अनुकूलनको बाइबल भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ! प्रशंसा ..
धेरै धेरै @SStep लाई सराहना गरियो!
मई 14, 2013 मा 3: 36 PM
म मेरो पृष्ठ शीर्षक पछाडि मेरो ब्लग शीर्षक जारी राख्न चाहन्न तर मलाई यो थाहा छैन कि यो कसरी गर्ने। म All In One Seo Pack प्लगइन प्रयोग गर्दैछु र मैले% Blog_title% हटाएको थिए जुन% page_title% पछि थियो, हाल यो% page_title% छ। तर यो अझै जारी छ। Header.php मा शीर्षक कोड छ, र page.php मा शीर्षक छ। मैले के गर्नुपर्दछ, त्यसैले ब्लग शीर्षक पृष्ठ शीर्षक पछि जारी हुँदैन।
मई 14, 2013 मा 4: 00 PM
म इमान्दारीपूर्वक All सेटिंग्स एक SEO प्याक प्लगइनबाट तपाईको सेटिंग्स निर्यात र वर्डप्रेस को लागी Yoast SEO प्लगइन स्थापना गर्दछ। तपाईं त्यहाँ सेटिंग्स आयात गर्न सक्नुहुनेछ र के तपाईं माथिको माथिको काम गर्नुपर्छ।